PAC-Man | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PAC-Man
PAC-Man APK ကို
ကမ္ဘာကျော် Arcade ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုခံစား PAC-Man, အခမဲ့! သင်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဂန်ရှောင်ရှားနေချိန်တွင်အပေါငျးတို့သ Pac-စက်နှင့်အသီးကိုစားရန်ဝင်္မှတဆင့် PAC-Man ကိုလမ်းပြအဖြစ်မြင့်မားသောရမှတ်များရယူနိုင်သော! ဒါမှမဟုတ်သူတို့အပျေါမှာ chomp ဖို့ပါဝါတောင့်စားခြင်းအားဖြင့်အပြာသူတို့ကိုလှည့်!
အဘယ်သူသည်ဤပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအိုင်ကွန်၏ retro စွဲလမ်းဂိမ်းကိုမေ့လျော့နိုင်သလဲ ပြန် 80 ရဲ့အတွင်းဒေသခံ Arcade မှာသုံးစွဲအခမဲ့အချိန်နှင့်ရပ်ကွက်၌ရှိသမျှသောသူတို့သည်မရေမတွက်နိုင်သောနာရီသတိမရကြသလော သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာသူတို့အားဂန္ဂိမ်းအချိန်လေး re-နထေိုငျ!
PAC-Man ယခုအရင်ကထက်ပိုကောင်း retro Arcade သင်သိဂိမ်းနှင့်ချစ်ခြင်းပါ! ပရိတ်သတ်တွေသန်းပေါင်းများစွာ join နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမူရင်းဝင်္, အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲနှင့်လက္ခဏာသက်သေဆုလာဘ်အဖြစ်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ * နှင့်အတူဒီဂန္တွေ့ကြုံခံစား!
Classic 8-bit Arcade လှုပ်ရှားမှုအတွက်
•အခုတော့လူတိုင်းကမူလအကြွေစေ့-op အိုင်ကွန်, PAC-Man ကစားနိုင်ပါတယ်
• Pixel စုံလင်သော - ကြည့်အသံ, သင်မှတ်မိလိုပဲခံစားရ!
•ကိုစှဲဟောင်းကျောင်းကိုဂိမ်း - ဝေး Run ဒါမှမဟုတ်သရဲတစ္ဆေကိုလိုက်!
•လွယ်ကူစွာသင်ယူဖို့, မာစတာရန်ခက်ခဲ - ရုံတစျခုထက်ပိုဂိမ်း!
•ရိုးရှင်းပြီး timeless ဂိမ်းဒီဇိုင်း၏အဓိပ်ပါယျ
•, 20 သရဲတစ္ဆေစား4အသီးကိုစား, 1000 အချက်များအရ, etc စာရင်းပေါ်နှင့်ပေါ်တတ်!
•3အခက်အခဲအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာယှဉ်ပြိုင်
•အမြင့်ဆုံးရမှတ် Get နှင့်ဦးဆောင်တက်!
အားလုံးအပေါ်ထပ် retro ဂန္ပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်! ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျကိုသှား PAC-Man ၏အဟောင်းကျောင်းကို Arcade အရေးယူယူခဲ့! ငါတို့သည်လည်း PAC-Man 2015 အတွက် Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဗွီဒီယိုဂိမ်းခန်းမထဲမဝငျခဲ့ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား
ယနေ့အခမဲ့ PAC-Man Download!
သင်တစ်ဦး Bandai ကိုဖျက်ဆီး-ဒါဟာ Ralph ပါဝါ Pac Mini ကိုပုံမျက်မမြင် Box ကိုဝယ်ယူနှင့်သင့်ကစားစရာကုဒ်ရွေးနှုတ်တော်မူလိုလျှင်တောင်းပန်ပါတယ်! Ralph အခြားဝင်္သို့သွားပြီ!
1 ။ အဆိုပါ PAC-Man Download: Ralph ဒီမှာဝင်္ app ကိုချိုး: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.google.pacralph
2 ။ သက်ဆိုင်ရာဒစ္စဇာတ်ကောင်အဘို့သင့်ကစားစရာကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ
3 ။ ခံစားကြည့်ပါ!
•ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝင်္ပြေးသမားဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ် Insider Pro ကို-သိကောင်းစရာများ
https://www.facebook.com/PACMANForMobile: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
http://www.bandainamcoent.com/home.html: ကြှနျုပျတို့၏ website ထုတ်စစ်ဆေး
* = တချို့ကစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
PAC-Man ™ & © 2019 BANDAI NAMCO Entertainment က Inc ကို BANDAI NAMCO လိုဂို BANDAI NAMCO Entertainment ကအမေရိကား Inc ကိုထုတ်ဝေသည် BANDAI NAMCO Holdings က Inc ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်
(ဥရောပ၌ 13 နှစ်အောက်) အဟောင်း 16 နှစ်အောက်အသုံးပြုသူများယခုဂန္ထဝင် PAC-Man ကိုခံစားနိုငျပါသညျ!
fixed အပိုဆောင်း bug တွေ။
50.19 ကို MB
BANDAI NAMCO Entertainment ကအမေရိကား Inc က